शिल्पालाई तारेखमा बस्न आदेश | Nagarik News - Nepal Republic Media
शिल्पालाई तारेखमा बस्न आदेश
काठमाडौं – फिल्म निर्माता छविराज ओझासँग बहुविवाह गरेको उजुरी परेकी अभिनेत्री शिल्पा पोखरेललाई साधारण तारेखमा बस्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ। शुक्रबार जिल्ला न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले अभिनेत्री पोखरेललाई तारेखमा बस्न आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले तारेखमा रहेर मुद्दाको बाँकी प्रक्रियामा सहभागी हुन आदेश दिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अभिनेत्री पोखरेलले सर्वोच्चमा बहुविवाह पक्राउ पूर्जी खारेज गर्न माग गर्दै विसं. २०७६ साउन २९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। रिटमाथि पहिलो सुनुवाईमा सर्वोच्चले गत भदौ १ मा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले पक्राउ पूर्जीको कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको थियो। उनले आफूले बहुविवाह नगरेको यसअघिका हेमा लगायतले कानुनअनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकाले आपूmलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण नभएको रिट निवेदनमा दाबी गरेकी थिइन्। विसं. २०४१ सालमा निर्माता ओझाले पहिलो पत्नी हेमासँग विवाह गरेका थिए । हेमाले आफूसँग सम्बन्धविच्छेद नै नगरी विवाह गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्।
पतिसँग सम्बन्धमा दरार आएपछि हेमा सम्बन्धविच्छेद नगरी अंशबन्डा गरेर बसेकी थिइन्। हेमापछि निर्माता ओझाले गीताञ्जली, रेखा थापा र शिल्पा पोखरेलसँग विवाह गरेका थिए। हाल गीताञ्जलीको निधन भइसकेको छ भने रेखा थापासँग निर्माता ओझाले सम्बन्धविच्छेद गरिसकेका छन्। गीताञ्जलीको निधन भइसकेको हुँदा उनीबाट जन्मिएका छोरा निर्माता ओझासँगै बस्ने गर्छन् । लामो समयदेखि धरान बस्दै आएकी हेमा र निर्माता ओझाका दुई सन्तान छन् ।निर्माता ओझाकी पहिलो पत्नी हेमाले अंशबन्डाभै छुटेर भिन्न भइसकेकी पत्नी भएको उल्लेख गरेकी छिन्। त्यसपछि निर्माता ओझा र अभिनेत्री रेखा थापाबीच विसं. २०५७ सालमा विवाह भएर विसं. २०६९ सालमा अंशबन्डा भएको थियो।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०८:२५ आइतबार
छविराज_ओझा बहुविवाह शिल्पा_पोखरेल